Fotopampianarana sy Fanekempihavanana 101 Skip main navigationEnglishSign In/ToolsSign InNotes and JournalMapsDirectoryCalendarPatriarchal BlessingMobile ApplicationsAll ToolsNewsletterLesson SchedulesSign OutSite MenuScripturesHoly BibleBook of MormonDoctrine and CovenantsPearl of Great Price2013 Edition of the ScripturesStudy HelpsBible VideosFormats and DownloadsSearch:
Fotopampianarana sy Fanekempihavanana Fizarana 101Fanambarana nomena an' i Joseph Smith Mpaminany tao Kirtland, Ohio, ny 16 Desambra 1833 (History of the Church, 1:458–464). Niaritra fanenjehana lehibe ireo Olomasina izay efa tafavory tao Missouri tamin' io fotoana io. Noroahin' ny mpihetraketraka hiala ny tranony tao amin' ny Fivondronan' i Jackson izy ireo; ary efa nanandrana ny nanorim-ponenana tao amin' ny Fivondronan' i Van Buren ny sasany tamin' ireo Olomasina, saingy nanaraka azy ireo ny fanenjehana. Tao amin' ny Fivondronan' i Clay, Missouri, ny ankamaroan' ireo Olomasina tamin' io fotoana io. Maro ireo fandrahonana ho faty natao tamin' ny mpikambana tao amin' ny Fiangonana. Efa nafoin' ny olona ny fanaka tao an-trano, ny fitafiana, ny biby fiompy ary ny fananana manokana hafa; ary maro tamin' ny voliny no efa nopotehina.1–8, Nofaizina sy nampahoriana ny Olomasina noho ny fandikany ny lalàna; 9–15, Hianjera amin' ireo firenena ny fahaviniran' ny Tompo, saingy hangonina sy hampaherezina kosa ny vahoakany; 16–21, Hatsangana i Ziona sy ireo tsatòkany; 22–31, Fampisehoana ny ho toetry ny fiainana mandritra ny Arivotaona; 32–42, Hotahina ary hovaliana soa ny Olomasina amin' izany; 43–62, Ny fanoharana momba ny andriandahy sy ireo hazo oliva izay maneho ireo korontana sy fanavotana an' i Ziona amin' ny farany; 63–75, Tokony hotohizan' ny Olomasina ny fiarahany mivondrona; 76–80, Ny Tompo no nanao ny Lalàm-panorenan' i Etazonia; 81–101, Tsy maintsy mitambezo ny Olomasina mba hanarenana ireo fahavoazana, araka ny fanoharana ny amin' ilay vehivavy sy ilay mpitsara tsy marina.
1 LAZAIKO aminareo marina tokoa, momba ireo rahalahinareo izay efa nampahoriana sy nenjehina ary noroahina hiala ny tany lovany— 2 Izaho Tompo dia efa namela ny fahoriana izay efa nampahoriana azy hianjady aminy ho setrin' ny fandikany lalàna; 3 Kanefa dia hanana azy ireo Aho, ary ho Ahy ireo amin' ilay andro izay hahatongavako mba hanangonako ny vatosoako. 4 Koa tsy maintsy ilaina ny hamaizana sy hizahan-toetra azy tahaka a